Mgbanwe ihu igwe gbanwere ọbịbịa nke Spain nke '' nnụnụ ndị na-adịghị ahụkebe '' | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbanwe ihu igwe gbanwere mbata nke Spain nke nnụnụ ndị na-adịghị ahụkebe »
Bucephala clangula (Osculated ọnya)
Animalsmụ anụmanụ niile na-achọ ebe kachasị mma iji chebe onwe ha pụọ ​​na oyi ma ọ bụ okpomọkụ. Ọtụtụ n’ime ha nọrọ oge ụfọdụ dị anya site na ebe obibi ha, mana ka okpomoku zuru ụwa ọnụ na-aba ụba, akparamagwa ha na-agbanwe, dịka ọ na-eme “nnụnụ ndị na - adịghị ahụkebe” na-abata na Spen.
Dika akuko ohuru sitere na komiti SEO / BirdLife Rarities, nke edeputara na akwukwo sayensi 'Ardeola', ụdị agba gburugburu na-adịkarị obere, ebe ụdị ndị Africa bụ, na-emegidekarị.
Maka SEO / BirdLife, mgbanwe a nke nnụnụ ndị ugwu nwetara na-emetụta oge oyi a na -akwụsịbeghị, na nke a na-amalite ịhụ ọhụụ na ụdị ndịda ya na okpomoku na-aga n’ihu nke Atlantic Ocean. Dịka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, oroma bulbul (Pycnonotus barbatus), nke nkesa Afrika, di na Tarifa, ebe o bidoro imeputa ya, na uhie-legged booby (sula sula), otu nnụnnụ mmiri nke si Caribbean, amalitela ịbata n'akụkụ a nke ụwa.
Ihe data ekpughere site na akuko ahu nke ahoputara na 2015, bu “ihe di nkpa ma nwekwaa nsogbu”, ma kwe ka ekwuputa ihe banyere ihe mgbanwe nke onodu ubochi na emetuta gburugburu na, karisia, na nnụnụ.
Pycnonotus barbatus (Oroma Bulbul)
Nnụnụ bụ anụmanụ ndị, dị ka ndị ọzọ, ọ bụrụ na ọnọdụ nke ebe obibi ha ka mma ha kpebiri ịnọ. Ma nke ahụ bụ, ike aku bu ihe di nkpa na ihe ndi di ndu. N'ihi nke a, ọnụọgụ SEO / BirdLife nke ụdị nnụnụ na-adịghị ahụkebe nwere ike ịbawanye ka afọ na-aga na ọnọdụ okpomọkụ na-aga n'ihu, belụsọ, n'ezie, e mere usoro dị irè iji gbochie mgbanwe ihu igwe.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgụ akụkọ ahụ, ịnwere ike Pịa ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Mgbanwe ihu igwe gbanwere mbata nke Spain nke nnụnụ ndị na-adịghị ahụkebe »
Ogologo ogo 3 ga-eyi egwu oyi akwa ozone